April 2017 – Arakan Times
AT Burmese ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှူးကမုဒိမ်းကျင့်ခဲ့မှုကြောင့်ကိုယ်ဝန်ဖြစ်တည်လာသောအမျိူးသမီးအားအခြားတစ်ဦးနှင့်အတင့်းလက်ထပ်ပေး
April 30, 2017	Leaveacomment 705 Views
ဘူးသီးတောင်မြို့၊တင်းမေကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်သာဦး(ဒိုင်းနက်)နှင့်လက်ကိုင်တုတ်ဦးဆော်လိမ်တို့ပူးပေါင်းပြီးရွာသားများအားမတော်မတရားနှိပ်စက်ခဲ့သည်ကိုမခံနိုင်၍အုပ်ချူပ်ရေးမှူး၏တပည့်ဆော်လိမ်ကိုနှိပ်စက်ခံရသူများကသတ်ဖြတ်ခဲ့ ကြပါသည်။ ဦးဆော်လိမ်သတ်ခံရမှုကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍အုပ်ချူပ်ရေးမှူးကျော်သာဦးကကူညီသည့်သဘောယောင်ဆောင်ပြီးဦးဆော်လိမ်နေအိမ်သို့အကြိမ်များစွာလာခဲ့လျက် ဆော်လိမ်၏သမီးဖြစ်သူ မ-အာရော်ဖာဘီဘီ၊၁၇နှစ်ခန့်ကိုမုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ပါသည်။ မုဒိမ်းကျင့်ခံရပြီးအမျိူးသမီးမှာကိုယ်ဝန်၎-လနီးပါးခန့်ဖြစ်တည်လာသည်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကသိရှိ၍ တစ်ရွာတည်းနေ အလွန်ဆင်းရဲသောဦးဆွေတာမတ်၏သားဖြစ်သူမောင် ဆိုက်ဖုလ်အာလောမ်နှင့် အဆိုပါအမျိူးသမီအား အတင်းလက်ထပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှူးသည်အာဏာအလွဲသုံး၍မုဒိမ်းကျင့်ပြီးဇီးကပ်မှုကြောင့်အခြားဆင်းရဲသားတစ်ဦးအပေါ်အနိုင်ကျင့်ကာအတင်းလက်ထပ်ပေးခြင်းသည် သက်ဆိုင်သူများသိရှိနိုင်ပါရန်AT burmese newsမှတဆင့်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
Myanmar authority takes plan of relocating violence affected Rohingya
April 29, 2017	Leaveacomment 807 Views
AT Correspondent, Maungdaw Myanmar authority has takenaplan of relocating the Rohingya residents who are the victims of crackdown of Myanmar security forces in Maungdaw north after the9October attack on BGP outposts. On 28 April 2017, Myanmar police accompanied by MaYaKa chairman went to the Hatgorzafara of Ngakuya union of Maungdaw and allotted piece of small lands ...
Village administrator conspires to accuseavillager inarape case
April 29, 2017	Leaveacomment 577 Views
AT Correspondent, Buthidaung The village administrator, Kyaw Tha Oo of Tin May (Tami) village of Buthidaung North has been trying to accuse an innocent youth inafalse rape case which is completelyaconspiracy against the boy, according to report. According to our correspondent report, Mohamed Salimavillager who was the collaborator of village administrator was killed by ...
6 Rohingya detained in Btd
April 28, 2017	Leaveacomment 758 Views
At least six Rohingya were arbitrarily arrested by Myanmar army on 27 April, 2017 in Sikderpara of Buthidaung north. Source said to our correspondent,agroup of army entered the Sikderpara village of Buthidaung north and arrested six innocent Rohingya. They were taken to army camp and confined at the custody where they were severely beaten up by army, source ...
Buddhist Extremists in attempt to attack Muslims’ Arabic School in Thaketa Township,Yangon, Myanmar
April 28, 2017	Leaveacomment 1,235 Views
AT Staff Report Hundreds of Buddhist extremists in Thaketa Township, Myanmar gathered in front ofaMuslims’ Arabic School withaview to attacking today 28 April 2017. According to report, the extremists mostly the leaders and members of MaBaTha 969 group of nationalist Wiratu tried to enter the compound of the School but the Muslim residents resisted them strongly. ...
China to mediate between Myanmar, Bangladesh over Rohingya issue
April 28, 2017	Leaveacomment 805 Views
AT Online Report China offered on Tuesday that it would help to tackleadiplomatic row between Bangladesh and Myanmar over the flight of minority Rohingyas, According to two Bangladesh foreign ministry officials. Sun Guoxiang, the Chinese special envoy on his four-day visit to Bangladesh, called upon Dhaka to resolve the row with Myanmar bilaterally, but also said Beijing stood ...
Delegation from USAID visits IDP camps in Sittwe
April 27, 2017	Leaveacomment 668 Views
AT Correspondent, Sittwe A high profile delegation from US Agency for International Development (USAID) has visited IDP camps and met with some Rohingya men in Sittwe on 26 April, 2017. Source said to our correspondent, the delegation from USAID specially visited the Thet Kay Pyin, Guaillardel, Sammaniafara and other IDP camps where they met with the Rohingya people and talked ...
AT Burmese ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တစ်ခုသဲချောင်းIDPသို့ရောက်ရှိ
April 27, 2017	Leaveacomment 761 Views
စစ်တွေမြို့သဲချောင်းIDPဒုက္ခသည်စခန်းသို့၂၆၊၄၊၂၀၁၇ခုနေ့၁၁း၀၀နာရီအချိန်တွင်UNနှင့်NGOတို့မှလူများပူးပေါင်း၍ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ရပ်အဖြစ်ရောက်ရှိလာပြီးဒုက္ခသည်များနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှလူငယ်များက”ကျွန်တော်တို့သည်နိုင်ငံတော်အစိုးရမှဖွဲ့စည်းပေးသမျှမည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုမျှလက်ခံယုံကြည်မည်မဟုတ်ကြောင်း၊နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးရလိုကြောင်း၊NVCကိုလက်ခံမည်မဟုတ်ကြောင်း၊UN၏လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ရေးအဖွဲ့လိုအပ်ကြောင်း၊ ဘဝလုံခြုံရေးနှင့်အသက်အာမခံချက်ရရှိရေးအတွက်UNမှဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း၊ဒုက္ခသည်စခန်းတွင်ဆက်လက်မနေလိုကြောင်း၊မိမိတို့၏မူလနေရာသို့ပြန်လိုကြောင်း၊ယုံကြည်စိတ်ချရသောဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ရခိုင်Local NGOကWFP၏စားနပ်ရိက္ခာမှပြတ်တောက်ယူသည့်အပြင်ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံခြင်းမပြုကြောင်း၊အစိုးရကခွဲခြားဆက်ဆံကြောင်း”စသည့်များကိုတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့်သက္ကပြင်သို့ရောက်ရှိပြီးဒေသခံများနှင့်လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ ကြပါသည်။ ဤကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားမိမိတို့ရင်ဆိုင်နေရသောအခက်ခဲများ၊မိမိတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ခံစားချက်များ ကိုတင်ပြနိုင်ခွင့်ရရှိသည့်အပေါ်အားရကျေနပ်မိကြောင်းAT Burmese newsသို့ ဒုက္ခသည်တစ်ဦးမှပြောပါသည်။
AT Burmese အစွန်းရောက်ရခိုင်များကဗလီဝတ်ပြုကျောင်းကိုမီးရှို့ ပြီးပြဿနာဖန်တီးရန်အကောက်ကြံ
April 27, 2017	Leaveacomment 580 Views
ရသေ့တောင်မြို့ စေတီပြင်ကျေးရွာရှိဗလီကို၂၅၊၄၊၂၀၁၇ခုနေ့ည၉း၃၀အချိန်တွင်ရခိုင်အစွန်းရောက်များကမီး ရှို့ပြီးနီးစပ်ရာရခိုင်ရွာထဲသို့ဝင်သွားခဲ့သည်။ဗလီအတွင်းမီးခိုလုံးများထွက်နေသည်ကိုရိုဟင်ဂျာများမြင်၍မီးငြိမ်းသတ်ရန်သွားသောအခါရခိုင်အယောက်ငါးရာနီးပါးရွာမှထွက်ပြီးဗလီကိုဝိုင်းရံလျက်မီးငြိမ်းသတ်ရန်သွားသူများအားပိတ်မိစေ၍ရခိုင်များကရဲကိုအကြောင်းကြားခေါ်ယူပြီးမီးသတ်သွားသူတို့အနက်အချိူ့ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့စေပါသည်။ ဖမ်းဆီးသွားများအားရဲက ခြိမ်းခြောက်၍ပေါ့ဆမီးဟုလည်းကောင်း၊မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မီးရှို့သည်ဟုလည်းကောင်း အတင်းဝန်ခံစေရန်အကောက်ကြံလျက်ရှိကြောင်းရွာသားတစ်ဦးထံမှသတင်းပေးပို့ပါသည်။ အဆိုပါဗလီသည်ရခိုင်ရွာနှင့်နီးစပ်လျက်တည်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း၊မီးခိုထွက်ချိန်သည်မှာဗလီ၌လူသူလစ်လပ်ချိန်ဖြစ်နေကြောင်း၊ဆိုလာပြားသုံးရာတွင်ဖယောင်းတိုင်သုံးရန်အကြောင်းမရှိကြောင်း ၊ဤသည်တို့ကိုအခွင့်ကောင်းယူ၍ရခိုင်အစွန်းရောက်များကမီးရှို့ ရာဖြစ်ကြောင်း၊ရခိုင်သတင်းမီဒီယာအချိူ့ တွင်ကောက်ကျစ်စိတ်ဖြင့်ရေးသားသောသတင်းမှာယုတ္တိမရှိကြောင်း၊ဤသို့သောအဖြစ်အပျက်များကိုသုံးသပ်လျှင်ပြဿ နာဖန်တီးရန်အကောက်ကြံလျက်ရှိကြောင်းဒေသခံတစ်ဦးမှAT Burmese newsသို့ပြောပါသည်။
Breaking News: Rakhine Extremists Set Fire to Mosque in Rathedaung
April 26, 2017	Leaveacomment 1,087 Views
AT Correspondent, Rathedaung Rakhine extremists torched an ancient mosque to ashes in Rathedaung Township on 26 April 2017 at around 9.30 PM. It has been reported that dozens of Rakhine youths, apparently locals, barge into the premise of the mosque at the village of ‘Zaydi Pyin’ in Rathedaung and set it on fire at around 9:30 pm (local time) on ...